ဘိုကြီး လော်စပီကာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဘိုကြီး လော်စပီကာ
Posted by မဟာရာဇာ အံစာတုံး on Sep 5, 2013 in Creative Writing |9comments
ချောင်းနက် မည်သော မြို့မကျ၊ တောမကျ အတန်ငယ် စည်ကားလှသော ကျေးရွာတစ်ရွာတွင် အလှူမင်္ဂလာပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်သည့်အခါ လော်စပီကာ (ဟွမ်း) ကြီးနှစ်လုံးသည် မပါမပြီး ဖြစ်လေသည်။ အလှူပွဲများ ဖြစ်သည်နှင့် ထိုထိုသော အလှူပွဲများ၏ မဏ္ဍပ်ထိပ်တွင် နေရာယူထားသည်မှာ ဤလော်စပီကာကြီး နှစ်လုံးပင် ဖြစ်လေသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ အလှူပွဲနှစ်ခု တိုက်ဆိုင်သော အခါများတွင်မူ အဆိုပါ လော်စပီကာကြီး နှစ်လုံး ငှားရမ်းနိုင်သော အလှူရှင်မှာ ပို၍ ဂုဏ်ယူနေသကဲ့သို့ ယင်းအလှူမှာလည်း စည်ကားသော အလှူတစ်ခု ဖြစ်နေတတ်ပေသည်။ လော်စပီကြီးများ မငှားနိုင်သည့် အလှူမှာမူ မည်သို့သော လူမျိုးမှ ပြုလုပ်သည့် အလှူဖြစ်ပါစေ၊ ယင်းအလှူတွင် ခြောက်တိခြောက်ကပ် ဖြစ်၍ နေတတ်သကဲ့သို့ အလှူရှင်မှာလည်း မျက်နှာငယ်ရတတ်လေသည်။
ယင်းသို့ အရေးပါ အရာရောက်လှသည့် လော်စပီကာကြီးနှစ်လုံး မှာလည်း နယ်နယ်ရရ မဟုတ်ချေ။ အသံအား လွန်စွာ ကောင်းလှပေသည်။ ချောင်းနက်ရွာမှ ဖွင့်လိုက်သော အလှူမင်္ဂလာ သီချင်းအား အခြားသော ရွာနီးချုပ်စပ် များမှပါ ကြားရနိုင်လောက်အောင် အသံအောင်သော လော်စပီကာကြီးများ ဖြစ်လေ၏။ အသွင်အပြင် အားဖြင့်လည်း ခမ်းနားလှပေသည်။ အဆိုပါ လော်စပီကာကြီး နှစ်လုံးအား ရွှေချထားလေသည်။ လော်စပီကာကြီးများ အလှူမဏ္ဍပ်များတွင် တပ်ဆင်သည့် အခါတွင်လည်း အမြင့်ထောင်ရန် ဝါးလုံးအား အသုံးပြုခြင်း မဟုတ်ချေ။ စပါယ်ရှယ် အချောသတ်ထားသော ကျွန်းတိုင်ကြီးများကို အသုံးပြုတတ်လေသည်။
အလှူပွဲသို့ လာသော သူစိမ်းတရံများ အနေဖြင့် အလှူမဏ္ဍပ်ရှိ ကျွန်းချောလုံးကြီးများ၏ ထိပ်တွင် ရွှေရောင် တလက်လက် တောက်ပနေသော အဆိုပါ လော်စပီကာကြီး နှစ်လုံးအား မြင်မိသည့်အခါများတွင် မျက်လုံးပြူးကာ အံ့သြသွားတတ်ကြလေ၏။ အလှူရှင် များမှမူ အဆိုပါ ရွှေလော်စပီကာကြီးများအား လက်ညှိုးညွှန်ပြရင်းဖြင့် ၎င်း၏ အလှူပွဲအတွက် ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားမဆုံး ဖြစ်နေတတ်လေ၏။ အလှူမင်္ဂလာနှင့် စပ်လျဉ်းသော စကားများအား ဆိုရာတွင်လည်း ရွှေလော်စပီကာကြီးများ အကြောင်းအား ချန်လှပ်ထား၍ မရပေ။ ထည့်သွင်း၍ ပြောကြားပေးရတတ်လေ၏။
ယင်းသို့ လွန်စွာ အသံအောင်ခြင်း၊ ရွှေချထားခြင်း၊ ကျွန်းတိုင်များ ထိပ်တွင် နေရာယူခြင်း၊ အလှူစကားဝိုင်းတွင် မပါမပြီး ဖြစ်ခြင်း စသည်ဖြင့် စပီကာတစ်လုံး၏ ဂုဏ်ပုဒ်ထက် ဘောင်ကျော်နေသော အဆိုပါ လော်စပီကာကြီး နှစ်လုံးအား ပိုင်ဆိုင်သူမှာ ချောင်းနက်ရွာ အနောက်မြောက်ပိုင်းတွင် နှစ်ထပ်တိုက်ကြီးဖြင့် နေထိုင်သည့် ရွာ၏ ဇော်များထဲတွင် တစ်ဇော် အပါအဝင်ဖြစ်သူ “ဘိုကြီး” ဆိုသူပင် ဖြစ်လေသည်။ ဘိုကြီး၏ ပုံပန်းသဏ္ဍာန်ကို ဖော်ပြရပါမူ ထိုသူသည် အရပ် ခပ်ပုပု၊ ဗိုက်ရွှဲကြီးဖြင့် ရွှေဆွဲကြိုးကြီးအား လူမြင်စေရန် အင်္ကျီအပြင်သို့ ထုတ်၍ ဝတ်ဆင်တတ်သူ ဖြစ်လေသည်။ ဤသည်ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဘိုကြီး ဆိုသူမှာ လွန်စွာ ကြွားဝါတတ်သူ ဖြစ်ကြောင်း သိနိုင်လေ၏။ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် စကားများအား ဖောင်ဖွဲ့ကာ ပြောတတ်သူ ဖြစ်သော်လည်း ၎င်းသည် ထန်းသမား သားတစ်ယောက် ဖြစ်သည့် အကြောင်းအရာ ကိုမူ အမြဲတစေ ချန်လှပ်ထားတတ်လေ၏။
ဘိုကြီး သည် ချောင်းနက်ရွာ၏ ဥက္ကဋ္ဌ အပါအဝင် ရွာ၏ မျက်နှာဖုံးများနှင့် လွန်စွာ ပနံသင့်သူလည်း ဖြစ်လေသည်။ ဥပုသ်နေ့များတွင်လည်း ရွာဦး ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၏ ဥပုသ် ဇရပ်တွင် ဘိုကြီး အပါအဝင် ရွာမျက်နှာဖုံး လူကြီးများ စုဝေးလျှက် ဥပုသ် သီလနှင့် မဆက်စပ်သော ကြွားဝါခြင်း စကားများဖြင့် ဖောင်ဖွဲ့၍ နေတတ်လေသည်။ အချုပ်အားဖြင့် ဆိုရသော် ချောင်းနက် ရွာသား အများစုမှာ အကြွားကြိုက်သော ရွာသားများ ဖြစ်ပြီး ယင်းသို့ အထဲတွင် အကြွားအသန်ဆုံးသော ဘိုကြီးမှာ ကြွားဝါခြင်းများဖြင့် အမွန်းတင်ထားအပ်သော ရွှေလော်စပီကာကြီးများ ငှားရမ်းခြင်းဖြင့် အလုပ်ဖြစ်လျှက် ရှိနေပြီး ယင်းလော်စပီကာ ကြီးများအား အကြွားသန်လှသော ဘိုကြီး၏ အမည်နာမဝိသေသန ဖြင့် ပေါင်းစပ်ကာ “ဘိုကြီး လော်စပီကာ” ဟူသော အမည်ဖြင့် ချောင်းနက်ရွာတွင်သာမက ရွာနီးချုပ်စပ်များတွင်ပါ ဟိုးဟိုးကျော်နေလေတော့၏။
လော်စပီကာခေါ်တဲ့ loudspeaker တွေက.. အသံတုန်ခါပြန့်ထွက်လွယ်ဖို့.. သတ္တု..ဒန်..ကိုသုံးတာများတယ်..
ဘိုကြီး… သူ့ပစ္စည်းကို.. အမွှန်းတင်.. ညာငှားနေပုံရကြောင်း…
ချက်ကော့ စာ ဖတ်ရသလိုပဲ
ဟုတ်တယ် — ချက်ကော့ ရဲ့ ဇီးသီး နဲ့ လာတွေ. နေတယ် ။ဒီမှာ ငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့ ဇိမ်မလို့ လုပ်တုန်းရှိသေးတယ် ပြီးပါပြီ နဲ့တွေ. နေ တယ်။ လုပ်ပါဦး ဒီလိုရေးပုံမျိုး လေးနဲ့ ဇတ်လမ်းရှည်ရှည် တပုဒ်လောက်။
ဒါဆို “လော် ကြွားစခန်း´´ ပေါ့နော် ဥပုဒ်စခန်းကို အမည်ပြောင်းထားတာလေ။
လော်စပီကာဆိုလို့ ကျုပ်နေခဲ့တဲ့ တပ်နားကပ်ရက်က
မင်္ဂလာဆောင်ဆိုလည်း မဆောင်ခင်၃ ၄ ရက်လောက်ကကြိုဖွင့်တယ်
အသုဘဆိုလည်း ၇ရက် ၇လီဖွင့်တယ်….ပါတ်ဝန်းကျင်နားမခံသာဘူး
မနက်၃နာရီခွဲလောက်ကစ ဖွင့်လိုက်တာ အိပ်ကိုမရဘူးဗျို့…
မော်တင်စွန်း ဘုရားပွဲရက်ဆိုရင် ပဲ့ထောင်ပေါ်မှာ လော်ကြီးတွေတပ်…
ဓာတ်စက်တွေ တလမ်းလုံးဖွင့်ပြီး သွားကြတာပျော်စရာကြီး ကိုရင်အံရဲ့…
ဒါပေသည့် အိမ်နားက ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ အလှုတို့၊ တရားပွဲတို့ ရှိရင်…
အဲသည့် လော်ကြီးက အတော်နှိပ်စက်တာမို့ ချစ်လည်းချစ် မုန်းလည်းမုန်း… ဟီး ဟီး
အားလုံးဘဲ စာပြန် နောက်ကျနေဒါ စောဒီးပါဗျာ ….
အခုတလော ကျုပ်မလည်း စာရေးမယ် ရေးမယ်နဲ့ မရေးဖြစ်ဘူး ဖြစ်နေတယ် ….
တို့ထားတဲ့ တို့စာလေးတွေတော့ ရှိပါရဲ့ …
အခု နောက်ဆုံး ဦးဆာမိ ပြောပြတဲ့ “ဂျိုးအမြုတေ ရှာပုံတော်” ဆိုတာလည်း ရေးထားသေးတယ် …
အဆုံးတော့ မသတ်ရသေး ….
အခု ဒီစာကလည်း တို့စာတွေထဲက တစ်ခုပေါ့ ခင်ဗျာ …
ဘာဖြစ်ဖြစ် လာရောက် အားပေးသွားကြတဲ့ သဂျီး၊ အောင်မဲလင်း၊ ကိုရဲရင့်လှိုင်၊ ဦးခင်ခ၊ အထက်ကိုယ်ဒေါ်ဂျီး၊ ဦးငေးကျောက်စ် တို့အား အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း …
နာ့ကိုများ.. အောင်မဲလင်းတဲ့ ။ဒ
နီပေးတဲ့နာမည်က မဂွတ်ပါဘူးတွာ..။
လင်းပါတယ် ဆိုမှ မဲ မလား ဟ။
အောင်ပါတယ် ဆိုမှ မဲ မလား ဟ ။
ရှေ့ နောက်မညီသောကြောင့်.. အီနာမည်ကို ပယ် ပါအိ ။
Sep7/ 3:21 pm